INew iPad Pro 2020: sikuxelela zonke iindaba | Iindaba zeGajethi
IPad entsha Pro 2020: sikuxelela zonke iindaba
UIgnacio Sala | | iapile, amacwecwe
U-Apple wazisa i-Pro Pro yokuqala ngo-Septemba ngo-2015, i-iPad eyi-12,9-intshi apho u-Apple afuna ukuba sikholelwe ukuba yeyona nto ibalulekileyo endaweni yelaptop. Ukusilela kweempawu kunye nemisebenzi yale modeli, kuqinisekiswe kuphela ukuba yayiyi IPad enkulu, ngaphandle kokunye.
Kwiminyaka elandelayo, iApple iqhubekile nokuhlaziya olu luhlu ngamaxesha athile, kwaye kwakungekho kude kube ngo-2018, nini IPad Pro indala Kwaye ekugqibeleni yaba yindawo efanelekileyo yelaptop, nokuba yi-PC okanye iMac, enkosi kwi-iOS 13 kunye nezibuko le-USB-C elamkelwe ngu-Apple kwi-Pro Pro 2018.
Ukuhlaziywa komjikelo woluhlu lwe-iPad Pro kusetelwe kunyaka onesiqingatha kwaye njengoko bekucwangcisiwe, u-Apple ubhengezile Isizukulwana sesine sePad Pro, Isizukulwana esinokubhaptiza njenge-Pro Pro s, kuba inani lemisebenzi emitsha kunye neempawu zincitshisiwe kwaye zigcina uyilo olufanayo njengeminyaka emibini edlulileyo.
1 Iimpawu zePad Pro 2020
1.1 Umboniso we-IPad Pro 2020
1.2 Iikhamera ze-IPad Pro 2020 ze-iPad
1.4 Ukunyaniseka okungathandekiyo kwi-iPad Pro 2020
1.5 IPad Pro 2020 yamandla
1.6 Amaxabiso e-IPad Pro 2020
2 Ikhibhodi yomlingo enomkhondo
2.1 Ikhibhodi yomlingo enexabiso le-trackpad
3 Ngaba kufanelekile ukutshintsha?
Iimpawu zePad Pro 2020
Umboniso we-IPad Pro 2020
Amarhe ngaphambi kokumiliselwa kwoluhlu olutsha lwe-iPad Pro acebise ukuba iApple ingasebenzisa iscreen ngetekhnoloji ye-mini-LED endaweni yeLCD yendabuko, amarhe ekugqibeleni aqinisekisiweyo. I-Apple yabhaptiza Isibonisi se-iPad njenge-Liquid Retina, umboniso obandakanya itekhnoloji yakutshanje.
Iscreen sePad Pro entsha ngokufanayo sinokuyifumana kwisizukulwana esidlulileyo nge I-120 Hz yokuhlaziya inqanabaUkukhanya okungama-600 nit, umbala obanzi we-gamut (P3), iTone yokwenene iyahambelana, kunye nokubonakaliswa okuncinci.
Iikhamera ze-IPad Pro 2020 ze-iPad
Ewe. Ndathi iikhamera. IPad entsha Pro 2020, idibanisa imodyuli engasemva eneeekhamera ezimbini: 10 mpx engile ebanzi kunye ne-12 mpx engile ebanzi, kunye nabo sinokurekhoda iividiyo ezintle kunye neefoto, nangona ayisosixhobo ekuthiwa sinokulawulwa kwezi njongo. Iseti yeekhamera ezimbini ze-iPad Pro zisivumela ukuba sithathe imifanekiso kwaye sirekhode iividiyo kumgangatho we-4k, ividiyo esinokwabelana ngayo kwaye sihlele kwisixhobo uqobo.
Ikhamera yangaphambili ye-iPad Pro akasiniki zindaba Iyamangalisa xa ithelekiswa nemodeli yangaphambili, kuba ikwahambelana ne-ID yobuso, inkqubo yokwamkelwa kobuso buka-Apple nayo yonke imisebenzi esele isinikwa ngu-Apple kuluhlu lwe-iPhone ngale teknoloji yokuqonda.
Ukunyaniseka okungathandekiyo kwi-iPad Pro 2020
Kwimodyuli efanayo apho iikhamera zibekwe khona, ikwangaphakathi Isikena somkhonto (UkuKhanya okuKhanyayo kunye nokuLungelelanisa) isivamvo esivumela ukumisela umgama ngokulinganisa ixesha elithathwayo ukukhanya kwesibane ukufikelela kwinto ethile kwaye kuyibonakalise kwakhona kwisenzi. Le nzwa isebenza ngokubambisana neekhamera, iisenzi zentshukumo kunye nenkqubo yokusebenza ukulinganisa ubunzulu, okwenza i-iPad Pro ibe sisixhobo esifanelekileyo sokwenyani okungathandabuzekiyo.
IPad Pro 2020 yamandla
Le iPad intsha, ilawulwa yi-chip ye-A12Z BionicUluhlu olutsha lweeprosesa ezibandakanya iApple yeprosesa eyisi-8. Okwangoku, asiwazi amandla asinika wona xa kuthelekiswa ne-A12 Bionic esiyifumana kwi-iPhone 11 Pro, kodwa ukuba isizukulwana esidlulileyo se-iPad Pro, esilawulwa yi-A10X Bionic, sisebenza njengekhubalo, kufuneka ukusebenza okuphezulu.
Olunye lotshintsho lwangaphakathi olunikwa yi-iPad Pro entsha malunga nendawo yokugcina. Ngelixa isizukulwane sesithathu se-iPad Pro siqale ukusuka kwi-64 GB, isizukulwana sesine esisandula ukwenziwa, Inxalenye ye-128 GB, ngexabiso elifanayo.
Amaxabiso e-IPad Pro 2020
Amaxabiso okuqala e-iPad Pro 2020 ayafana nesizukulwana esidlulileyo, ekuphela kwento etshintsha yindawo yokugcina, eli xesha eliqala ukusuka kwi-128 GB endaweni ye-64 GB yesizukulwana esidlulileyo.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 128GB yokugcina: 879 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 256GB yokugcina: 989 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 512GB yokugcina: 1.209 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 1TB yokugcina: 1.429 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 128GB yokugcina: 1.049 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 256GB yokugcina: 1.159 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 512GB yokugcina: 1.379 euro.
I-11-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 1TB yokugcina: 1.599 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 128GB yokugcina: 1.099 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 256GB yokugcina: 1.209 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 512GB yokugcina: 1.429 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi 1TB yokugcina: 1.649 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 128GB yokugcina: 1.269 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 256GB yokugcina: 1.379 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 512GB yokugcina: 1.599 euro.
I-12,9-intshi ye-iPad Pro ye-WiFi + ye-LTE 1TB yokugcina: 1.819 euro.
Ikhibhodi yomlingo enomkhondo
Ikhibhodi entsha ye-iPad Pro ethiwe thaca ngu-Apple kunye nesizukulwana esitsha yeyona nto itsala umdla, ikhibhodi leyo Imagnethi yokuncamathela kwi-iPad kwaye ivumela uhlengahlengiso kwikona yesikrini ngaphandle kokufuna ukuyiphumlisa nangaliphi na ixesha kwikhibhodi. Ukongeza, ibandakanya izibuko lokutshaja le-USB-C, izibuko elikuvumela ukuba ubize i-iPad Pro ngaphandle kokuyisusa kwikhibhodi, nangona iyinkqubo elula kakhulu kwaye yendalo.
Ikhibhodi enobungakanani obugcweleyo ibandakanyiwe izitshixo eziqinileyo kunye neendlela zesikere 1mm yohambo olunika imvakalelo ebutofotofo, ukuchaneka kunye nengxolo encinci. Ikhibhodi nayo ubuyisele umva, ke siya kuba nakho ukusebenza nakweyiphi na imeko.
I-trackpad kwikhibhodi entsha yoMlingo yile nto i-iPad Pro isweleyo ukuba ibe yindawo efanelekileyo yelaptop. Kufuneka ikhunjulwe ukuba nge IOS 13, iApple yazisa ngenkxaso yemouse kwi-iPad, ke inyathelo elilandelayo yayikukubonelela ngebhodi yezitshixo kunye ne-trackpad, ikhibhodi esele ikho kwimarike kwaye iphezulu kakhulu.
Ikhibhodi yomlingo enexabiso le-trackpad
Okwangoku sazi kuphela ixabiso lekhibhodi yomlingo eMelika. Ikhibhodi yobuGcisa ye-11-intshi ye-iPad Pro inexabiso kwi IRandi ye299Ngelixa imodeli ye-12,9-intshi ye-iPad inyuka iye phezulu Iidola ze-349.
Ukuba unayo i-2018 iPad Pro, akukho sizathu sinyanzelayo Ukuthatha umhlala phantsi kwaye uthenge imodeli entsha. Njengoko benditshilo kweli nqaku, eyona nto inomdla malunga nesi sizukulwana esitsha ayisiyiyo iPad Pro uqobo, kodwa ikhibhodi yobuGcisa, ikhibhodi yobuGcisa enetrafti ehambelana nePad Pro 2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » iapile » IPad entsha Pro 2020: sikuxelela zonke iindaba